Cheatsheet Marketing amin'ny mailaka farany | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 21, 2013 Alatsinainy Oktobra 21, 2013 Kelsey Cox
Misy paikady sy fahazarana maro isafidianana rehefa mieritreritra ny fomba fanatonanao mailaka ary marketing amin'ny atiny. Mpivarotra mailaka be mpikirakira be indrindra no mampiasa tetika tsy manam-paharoa toa ny paikady, ny fotoana, ny fitsapana ary ny fanatsarana ny endrika amin'ny ankapobeny, fa inona kosa ny tetika manome ny vokatra tsara indrindra? Iza no tokony hifantohanao mihoatra ny iray hafa?
Miaraka amin'ny salanisan'ny mpanakanto mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny fampivoarana ny famoronana (23%) raha oharina amin'ireo mpilalao sangany manokana ny fotoanany amin'ny tetikady (22%) dia mazava fa ny fandefasana dia mety manadanja - na tsy mihoatra ny — ny atiny izay anananao ' manome indray.
Diniho, ohatra, fa ny 72% amin'ireo mpivarotra rehetra dia mizaha ny laharan'ny foto-kevitr'izy ireo alohan'ny handefasana ireo lisitry ny fizarana azy ireo, raha 15% fotsiny no mizaha ny fisehon'ireo mailaka sy ny fampisehoana sary. Raha jerena ny zava-misy fa ny 75% tompona finday avo lenta dia “azo inoana” fa hamafa mailaka tsy hainy vakiana amin'ny findainy, ny tsy fandinihany ny tombotsoan'ny fanatsarana ho an'ny finday dia mety hiteraka fatiantoka be ao anatin'ny fampielezan-kevitra ataon'ny tsirairay, tsy lazaina intsony manerana ny paikady marika ankapobeny.
Ity dia iray amin'ireo lafiny maro hodinihina rehefa mitady hanatsara ny fahombiazan'ny marketing amin'ny mailakao. Soa ihany, Marketo dia nametraka mora ampiasaina "cheatsheet mailaka”Ho antsika hanovozan-kevitra amin'ny fanantenana hanatsarana sy handaminana tsara ny paikadin'ny mailaka:
Tags: mailaka MarketingMarketing Infographics